Maxkamadaha darajada 1-aad iyo sare ciidamada oo loo dhiibay madax cusub – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wareegto uu ku saxiixnaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa waxaa 23-kii bishaan September loogu magacaabay xilka guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida, Col. Liibaan Cali Yaroow oo horay u ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida.
Xilkaas waxaa horay u hayaye Col. C/raxmaan Tuuryare oo 2 maalmood ka hor loo magacabaay Taliyaha Nabad Sugidda Soomaaliya, kadib markii xilkaas laga qaaday C/llaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe.
Isla wareegatda ayaa G/le Xasan Cali Nuur (Shuute) oo loo magcaabay guddoomiyaha maxkamadda darada 1-aad ee ciidammada Qalabka Sida ee Soomaaliya.
“Madaxda iyo saraakiisha ay sida tooska ah ugu socoto warqaddani iyo oggeynsiintaba, waxaa lagu wargelinayaa sida ku cad lifaaqa oo ah xeer madaxweyne Lam. 56 iyo xeer madaxweyne Lam. 57 ee soo baxay 21/09/2014, oo lagu dallacsiiyey min hal darajo, laguna kala magcaabay sarakiisha soo socota xilalka ku hor qoran waxeyna kala yihiin.
1.G/sare Liibaan Cali Yarow oo loo gamacaabay guddoomiyaha Maxkamadda sare ee ciidammada Qalabka Sida ee Soomaaliya.
2. G/le Xasan Cali Nuur (Shuute) oo loo magcaabay guddoomiyaha maxkamadda darada 1-aad ee ciidammada Qalabka Sida ee Soomaaliya” ayaa lagu yiri qoraal uu soo saaray Maxamed Sheekh Xasan oo ah Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya.
Guddoomiyaha Maxkamadda sarre ee ciidammada Qalabka Sida ee Soomaaliya, G/sarre liibaan Cali Yarow, ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ahaa guddoomiyaha maxkamadda Darajada 1-aad ee Ciidammada Qalabka Sida, haddaba waa sidee heerka Khibrad iyo aqoon ee guddoomiyaha cusub ee Maxkamadda sare ee Ciidammada Qalabka Sida.
Guddoomiye Liibaan Cali Yarow oo loo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada, ayaa ka tirsan saraakiisha ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed, waxa uu soo maray heerar kala duwan sida, isaga oo ka soo baxay Jaamacadda (Universal Of Africa, Kalliyadda Sharciga iy Qaanuunka). Waddanka Suudaan.
Sidoo kale waxa uu soo qaatay tababarro kala duwan sida isaga oo ka soo baxay machad Al-Mushaa 2009-2010-kii, ee dalka Suudaan, halkaas oo uu ku soo qaatay tababar Garsoore.
1- Sannadkii 2003-2009, waxa uu soo noqdey macallin Iskuul.
2- Garsoore Maxkamadda Ciidammada Qalabka Sida sannadkii 2010-2011-kii.
3- Guddoomiyaha Maxkamadda darada 1-aad ee ciidammada Qalabka Sida ayuu soo qabtay hadana waa guddoomiyaha maxkamadda sarre ee ciidammada.
Waa nin Shahaada Master Degree ka soo diyaariyey Jaamacadda (Naayif Al-Carabiya Lilculuum Al-Amniya, Sacuudiga Riyaadh, 2003.